Umxholo kaJohn E. DuPont
I-Millionaire Sports YeWannabe yajika yababulala
UJohn E. du Pont wayengumdlalo we-wannabe owawuzuze izigidi zabantu kwaye wathenga isimo kwilizwe lezemidlalo ukuba amandla akhe asemandleni awazange aphumelele. Iqhawe likaOlimpiki uDavid Schultz, enesidingo sokuxhaswa ngemali, wayehlala kwikampu yokulwa nePont, isigqibo esiphelela kwindleko ebomini bakhe.
Fortune ye Fortune
UJohn E. du Pont, umzukulu ka-EI du Pont, uyindlalifa ye-du Pont fortune eyayingaphezulu kwama-dollar 200.
Emva kokufa kukaMama ngo-Agasti 1988, waphendulela i-800-acre estate yakhe eDelaware County, ePennsylvania ukuba abe yinkampu yokulwa nabadlali beengcali. i-Pont yayiyeyona eyona nto incedisayo yokulwa nombindi e-United States ngeli xesha.
Abantu abachitha ixesha elijikeleze i-du Pont bachaza indlela abaziphatha ngayo njengento emangalisayo. Kuyo yonke loo nto wayitshintsha ekubeni engaqondakaliyo ngokunyaniseka. I-Pont yayiyilungisa ukuba imithi yakhe kwipropati yayijikeleza. Kwakhona i-razor yambethe i-attic yakhe ngenxa yokuba wayecinga ukuba abantu baya kungena kwaye bambulale. Umfazi wakhe wangaphambili wayekhalaza ukuba ngexesha lomtshato wabo omfutshane ukususela ngo-1982 ukuya ku-1985, i-du Pont yammangalela ngokuba yi-spy kwaye yatsho izibhamu entloko.
UDavid Schultz wayengumqhubi weOlimpiki owayehlala kwindawo yePont. Ngomhla kaJanuwari 6, 1996, uJohn du Pont wadubula iinqwelo ezininzi e-Schultz, wambulala.
Izizathu zezenzo zakhe azikazanga.
Emva kweDe Pont wabulala u-Schultz wazibethela ngaphakathi kwindlu yakhe enkulu. Amapolisa axoxisana nomntwana oneminyaka engu-56 ubudala wePont ezimbini iintsuku. Ngomhla wesibini, ukushisa kwakushushu kakhulu kangangokuba amapolisa ayakhubaza ukufudumala kwekhaya. du Pont waphuma emzini wakhe ukuphanda oko kwakungalunganga ngomoya wakhe wamandla kunye namapolisa akwazi ukumnqoba aze amthubele, amshaye ngokubulala .
Kwixesha likaTe du Pont, kwacaciswa ukuba wayegula ngengqondo. Ufunyaniswe enetyala lokubulala umgangatho wesithathu waza wagwetywa iminyaka engama-30 entolongweni okanye kwiziko leengqondo; nayiphi na indlela efanelekileyo ifanelekileyo kwimeko yakhe yengqondo ade agqibe isigwebo sakhe. Kwafuneka kwakhona ukuba abuyisele i-Delaware $ 742,107 kwiindleko zokuvavanya.
Wazalwa - 1938
Indawo yokuzalwa - eFransi
Ngesini - indoda
Unqulo - Lungaziwa
Ubuhlanga - Mhlophe
Ngo-1988 - Ukuxhatshazwa ngokwesondo - i-Lawsuit efakwe ngu-Andre Metzger.
NgoFebruwari 26, 1997 - Ukuhlaselwa - Ukutshintshela isibhamu sakhe kumcebisi wokhuseleko.
NgoFebruwari 26, 1997 - Ubulali - Udubula kunye nowabulala i-Olimpiki uDavid Schultz.
Isicwangciso sokuSebenza ngokuTyebisa
Ubugcisa beCave - Ziziphi i-Archaeologists eziye zazifunda
Kutheni iCawa yamaKatolika inemiyalelo emininzi yabantu?
INtshonalanga YaseNew York Online
Yintoni "Ibhola Angayithethi?"
Imephu ye-Mid-Ocean Ridges